Tenderedza Kutenderera - Mamirioni Macheki
Isu paMamirioni Macheya tinotanga tarisa pakuita kuti bhizinesi ribudirire, zvakare, kudzimisa kuronga uye mukweretesi wakakonzeresa kudzoreredza. Isu tese tinoziva Zvimwe zvekutengesa, hombe mabhenji uye akawanda vatengi ndizvo zvakanakisa kugadzirisa matambudziko emari uye mukudzosa iro bhizinesi kune hutano bhizinesi kutenderera. Isu tinotarisa kuchengetedza kuchengetedza kwemuridzi wevaridzi uye tinoedzawo kuita hutungamiri hwepamusoro hwevatungamiriri, vashandi vepamberi uye nevashandi vezvemabhizinesi mukuchinja maitiro.
Makambani anotarisana nematambudziko akanyanya, hanzi nyanzvi yedu yekutendeuka kuti vabatsirwe kuti vadzoke pakuteerana.
Isu tinobatsira makambani nekupa kubvunza nezvekapfupi purojekiti yeprojekiti uye zvakare pane lond term Strategic nheyo. Imwe yemabhenefiti akakurisa ekubhadhara timu yedu yehunyanzvi kuunza kuoneka. Basa mukupa nekutarisa uye nekurumbidza uye nekuunza maitiro ari mune zvakanakira kufadza kambani.
Kana kambani yakarova chenguva pfupi yakaoma chigamba nekuda kwekunyanyisa mamiriro ezvinhu, sekuderera kwehupfumi kuderera kana indasitiri inoderera, inogona kusvika nekuhaya nyanzvi yedu yekushandura nyanzvi. Izvi hazvisi zvishoma nyonganyonga uye kukanganisa pane kuunza anotendeuka nyanzvi. Nekudaro, kana nyaya dzikadzika, sekubhuroka kana kubatana kwakundikana kana chinja chinja, ipapo kazhinji, ndiyo chete nzira yekuchengetedza kambani.
Isu tinowanzotenderana kusarudza pazasi ataurwa mapepa pakutanga mushure mekunyatsoongorora mamiriro ezvinhu:
Kubvunzana kubatanidzwa kunowanzoita vhiki dzinoverengeka kana mwedzi kana makore zvichienderana nemamiriro ezvinhu nedambudziko asi kutanga nekumisa nguva kwakatemerwa kuitira kuti kubatanidzwa uye mutengo zvirarame.
Maumbirwo emubhadharo unogara uchifungidzirwa pakutanga kuti uve nechokwadi chekuti mapato ese ari maviri akasununguka, anogona kunge ari kuita basa kwakasununguka, pakubatanidzwa kana muyero wekubhadhara kweawa zvichienderana nekugadzikana kwemapato ese.
Zvinangwa zvakajeka uye zvinoyera zvinomisikidzwa pamberi pechikwata chehunyanzvi kutanga basa kuitira kuti munhu wese ari papeji imwechete maererano neichi chinotora chisungo.
Chikwata chedu chinoshandurwa Nyanzvi chiita kumusoro kusvika kuzasi kwekuongorora kwebhizinesi kuona tarisiro yaro yerumutsiriro uye remangwana purofiti. Kana paine mukana wekumutsidzira, saka chete isu tinotora basa racho, mushure mekuita tsvakiridzo yakadzama yezvemari yekambani uye nekudzika-kuongororwa nekufunga nezvepfungwa nevanhu vane zvakakosha vanga vachimhanya kuratidzira, zvinosanganisira, vatariri, mamaneja uye nhengo dzemabhodhi, nezvimwe.
Mushure meizvi, tinowanzogadzirira chirongwa chekuita iyo inonyora kukurudzira kwedu uye mirefu yekusvikira mabhenji ezvekuita, zvinowedzerawo semepu yemugwagwa kune yakanaka uye inobatsira shanduko.